ကိုယျ့ကို အဆငျပွရေဲ့လားလို့တောငျ မေးဖျောမရတဲ့လူတှအေတှကျ အမွဲတမျးအဆငျသငျ့ဖွဈနတောတှေ ရပျသငျ့ပွီ … – Shinyoon
ကိုယျ့ကို အဆငျပွရေဲ့လားလို့တောငျ မေးဖျောမရတဲ့လူတှအေတှကျ အမွဲတမျးအဆငျသငျ့ဖွဈနတောတှေ ရပျသငျ့ပွီ …
January 10, 2021 by Shin Yoon
လူတခြို့က ကိုယျ့ဆီ လိုမှာသာလာတာပါ လိုခငျြတာရပွီးသှားတဲ့အခါ ပွနျသှားတတျတာပဲ ကိုယျ့ကိုအဆငျပွရေဲ့လားတဈခကျြမေးဖျောတောငျ မရကွဘူးလေ .. သူ့တို့ဒဏျရာမှ ပိုကွီးတတျတဲ့ လူတှကေ ကိုယျလဲ နာကငျြတတျတယျဆိုတာ မနေ့ကွေတယျထငျပါတယျ
တဈခါတဈလကေတြော့ ကိုယျပေးတဲ့အတိုငျး ပွနျရခငျြတာမဟုတျပဲ ကိုယျ့ကို လိုသုံးမလုပျစခေငျြတာပါ ကိုယျ့ကွောငျ့အဆငျပွသှေားရငျ ပြျောပါတယျဆိုပမေယျ့လေ ကူညီရငျးက ခကျခဲ့သှားတဲ့ကိုယျ့အတှကျ နဲနဲလောကျဖွဈဖွဈ ပွနျငဲ့ကွညျ့စခေငျြမိတယျ
ဖွူသောလကျတှကေ ပေးပဲပေးတတျတယျ ပွနျပွီးမမြှျောလငျ့တတျဘူးတဲ့ ကြှနျမ ပေးခဲ့တုနျးကတော့ ပွနျပွီး ရပါစဆေိုတဲ့ မြှျောလငျ့ခကျြတှေ မပါခဲ့ဘူးလေ … ဒါပမေယျ့ ကြှနျမပေးတဲ့လကျတှကေ သိပျပွီးမဖွူဘူး ယူတဲ့လူတှပေေးသှားတဲ့ ဒဏျရာတှနေဲ့ သှေးစို့နတေယျလေ …
လူတိုငျးမှာ အဆငျမပွမှေုကိုယျစီနဲ့ပါ ဒါပမေယျ့ တခြို့လူတှကေတော့ အဲ့လိုမတှေးဘူး သူတို့အဆငျမပွမှေုဟာပဲ လူတိုငျးထကျ ပိုပွီးခကျခဲတယျလို့ထငျတတျကွတယျ ကိုယျကော အဆငျပွနေပေါ့မလားဆိုတဲ့ အတှေးတှေ မရှိဘူး သူတို့အဆငျမပွတောတှပေဲ ဖေးမပါလို့ပွောတယျ
ကိုယျ့ကို အဆငျပွရေဲ့လားလို့ မေးဖျောမရတဲ့လူတှအေတှကျ အမွဲတမျးအသငျ့ဖွဈနတောတှကေို ရပျသငျ့ပွီထငျပါတယျ ကိုယျကူညီ ကိုယျ ခကျခဲသှားတဲ့အခါ အဲ့တာ ကိုယျနဲ့ပဲ ဆိုငျတယျဆိုတဲ့ ခေါငျးစဉျတှပေဲပေးတယျ ကိုယျ့ဟာနဲ့ကိုယျ အဆငျပွနေရေဲ့သားနဲ့ သူတဈပါးနရော ဝငျပူမိတဲ့ ကိုယျကပဲ မှားနတေယျ တဲ့ …
အဆငျမပွမှေုဆိုတာ လူတိုငျးမှာ ရှိနတေတျပါတယျ … ကိုယျ့ကို ကူပေးဖူးတဲ့လူတဈယောကျကို အနညျးဆုံးတော့ အဆငျပွရေဲ့လားလို့မေးဖို့မမပေ့ါနဲ့ ….
ကိုယ့်ကို အဆင်ပြေရဲ့လားလို့တောင် မေးဖော်မရတဲ့လူတွေအတွက် အမြဲတမ်းအဆင်သင့်ဖြစ်နေတာတွေ ရပ်သင့်ပြီ …
လူတချို့က ကိုယ့်ဆီ လိုမှာသာလာတာပါ လိုချင်တာရပြီးသွားတဲ့အခါ ပြန်သွားတတ်တာပဲ ကိုယ့်ကိုအဆင်ပြေရဲ့လားတစ်ချက်မေးဖော်တောင် မရကြဘူးလေ .. သူ့တို့ဒဏ်ရာမှ ပိုကြီးတတ်တဲ့ လူတွေက ကိုယ်လဲ နာကျင်တတ်တယ်ဆိုတာ မေ့နေကြတယ်ထင်ပါတယ်
တစ်ခါတစ်လေကျတော့ ကိုယ်ပေးတဲ့အတိုင်း ပြန်ရချင်တာမဟုတ်ပဲ ကိုယ့်ကို လိုသုံးမလုပ်စေချင်တာပါ ကိုယ့်ကြောင့်အဆင်ပြေသွားရင် ပျော်ပါတယ်ဆိုပေမယ့်လေ ကူညီရင်းက ခက်ခဲ့သွားတဲ့ကိုယ့်အတွက် နဲနဲလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြန်ငဲ့ကြည့်စေချင်မိတယ်
ဖြူသောလက်တွေက ပေးပဲပေးတတ်တယ် ပြန်ပြီးမမျှော်လင့်တတ်ဘူးတဲ့ ကျွန်မ ပေးခဲ့တုန်းကတော့ ပြန်ပြီး ရပါစေဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေ မပါခဲ့ဘူးလေ … ဒါပေမယ့် ကျွန်မပေးတဲ့လက်တွေက သိပ်ပြီးမဖြူဘူး ယူတဲ့လူတွေပေးသွားတဲ့ ဒဏ်ရာတွေနဲ့ သွေးစို့နေတယ်လေ …
လူတိုင်းမှာ အဆင်မပြေမှုကိုယ်စီနဲ့ပါ ဒါပေမယ့် တချို့လူတွေကတော့ အဲ့လိုမတွေးဘူး သူတို့အဆင်မပြေမှုဟာပဲ လူတိုင်းထက် ပိုပြီးခက်ခဲတယ်လို့ ထင်တတ်ကြတယ် ကိုယ်ကော အဆင်ပြေနေပါ့မလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေ မရှိဘူး သူတို့အဆင်မပြေတာတွေပဲ ဖေးမပါလို့ ပြောတယ်
ကိုယ့်ကို အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ မေးဖော်မရတဲ့လူတွေအတွက် အမြဲတမ်းအသင့်ဖြစ်နေတာတွေကို ရပ်သင့်ပြီထင်ပါတယ် ကိုယ်ကူညီ ကိုယ် ခက်ခဲသွားတဲ့အခါ အဲ့တာ ကိုယ်နဲ့ပဲ ဆိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တွေပဲပေးတယ် ကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ် အဆင်ပြေနေရဲ့သားနဲ့ သူတစ်ပါးနေရာ ၀င်ပူမိတဲ့ ကိုယ်ကပဲ မှားနေတယ် တဲ့ …
အဆင်မပြေမှုဆိုတာ လူတိုင်းမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ် … ကိုယ့်ကို ကူပေးဖူးတဲ့လူတစ်ယောက်ကို အနည်းဆုံးတော့ အဆင်ပြေရဲ့လားလို့ မေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ ….
ကနျြခဲ့တဲ့သူ နဲ့ ခနျြခဲ့တဲ့သူ ဘယျသူက ပိုပွီးနာကငျြရသလဲ